Trivia Murder Party 2 inopedza Jackbox Party Starter - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Trivia Murder Party 2 inopedza Jackbox Party Starter
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 29, 2022 | nhau, Vhidhiyo mitambo
Jackbox Mitambo yakazivisa Trivia Murder Party 2 sezita rechitatu uye rekupedzisira muJackbox Party kutanga. Gare gare gore rino, Jackbox Party Starter, muunganidzwa wemitambo mitatu yakatoburitswa asi yakatangwazve, ichave yakanyatso kugariswa muGerman.
Pamusoro peTrivia Murder Party, Tee KO uye Quiplash 3 inosanganisirwa muYakanakisa Yekuunganidza. Vanhu vamwechete vakashanda pakugadzirisa kweHauzive Jack ndivo vane basa rekushandura kweGerman kwemitambo. Mitambo kubva kuMitambo yeJackbox yakakodzera mapato: munhu wese anogona kujoina, nekuti nharembozha, mahwendefa uye makomputa anoshandiswa sevatongi. Mune mimwe mitambo, kunyange vanopfuura 10.000 vamwe vaoni vanogona kutora chikamu kupesvedzera mhedzisiro.
Jackbox Party Starter: Kuburitswa muzhizha
NeTrivia Murder Party 2, muparidzi uye mugadziri weJackbox Mitambo inozoburitsa zita rekupedzisira remutambi weJackbox Party. Muunganidzwa uyu une mitatu yemitambo inonyanya kufarirwa kubva yapfuura Jackbox Party Packs, yakapinzwa zviri pamutemo muGerman, French, Spanish neItalian kekutanga. Vanhu vamwechete vakashanda pakuita kuti Iwe Hauzive Jack ndivo vane basa reshanduro yechiGerman.
Parizvino, iwo mazita Quiplash 3 uye Tee KO akavhurwa kubva kuJackbox Party Starter line-up. Ikozvino chidzitiro chinowira pamutambo wechitatu uye wekupedzisira muunganidzwa: mune yeTrivia Murder Party sequel, mhondi inouraya yapinda muMurder Hotel kwaakakurira. Kare mhuri yake yaiuraya vaenzi vasingafungire ipapo, asi iye zvino ari kushandisa chivakwa ichi kutambira mutambo wake unoshamisa ... umo iye anouraya vaenzi vasingafungiri.
Sezvakaita yekutanga Trivia Murder Party, vatambi vanopindura akasiyana trivia mibvunzo. Kana vakapindura zvisizvo, vanotumirwa kuKilling Floor kuti vatore chikamu mumitambo mini-inouraya. Mumitambo midiki mitsva, vanofanirwa kunzvenga minondo inonamira mubhokisi remashiripiti, kunyora nyora yemhondi kumusana kwake, uye kupedzisa kutsvaga kunotyisa kupfuura zvese… vachishandisa nhare yekufona inotenderera!
Iine mazita ane mukurumbira Quiplash 3, Tee KO uye Triva Murder Party 2, Jackbox Party Starter ndiyo sarudzo yakanaka kune chero munhu anoda kutanga yavo Jackbox stream. Kana iwe uchida kuita kuti mutambo usvike kune vanoona, zviri nani kushandisa sevhisi yekufambisa seTwitch kana YouTube. Pamapuratifomu aya, vashandisi vanogona kutepfenyura skrini yavo uye kugovera chinongedzo nevamwe vanogona kubva vaona kana kutamba pamwe chete.
Kuti vatange kutenderera, vatambi vanoda kutepfenyura software. Vhura Broadcaster Software Studio ndeyemahara uye inobatanidza nyore neTwitch uye YouTube. Jackbox Mitambo inopawo mirairo yekutenderera paTwitch uye YouTube. Neese masevhisi aya, vagadziri vanokurudzira kushandisa yakaderera latency marongero. Izvi zvinovimbisa kuti munhu wese anogona kuona mutambo mu "chaiyo nguva" zvakanyanya sezvinobvira.
Vashandisi vanogona zvakare kutamba pamwe chete neshamwari murukova. Kune hova uko vashandisi vanotamba pamwe nevasingazive, Jackbox mazita anopa mamwe anobatsira maficha kudzivirira kubva kune troll. Jackbox Party Starter inosanganisirawo kutuka izwi sefa uye moderator maficha anogona kugadziridzwa mune yemutambo zvigadziriso menyu.
Kuuya zhizha rino, Iyo Jackbox Party Starter inoratidzira mitatu yemitambo inonyanya kufarirwa yeJackbox yakaburitswa zviri pamutemo muGerman, French, Italian neSpanish kekutanga.
Kuhwina Moves 11088 - Yakanyanya* 19,99 EUR tenga
Kare Mitambo yemhuri mitsva inowanikwa kubva kuPegasus Mitambo
Inotevera Nhau dzemutambo webhodhi: Nemitambo yemashanga kumapuraneti asingazivikanwe
Muedzo wemutambo weWarcraft 3 Reforged: Remaster ine matambudziko - ichiri yakanaka zvakakwana?
Asmodee: Kusimbisa mukutengesa
Nei Nintendo Shandura iri kuchinja console mutambo zvachose
Kufa Chiedza 2 inowana Mutambo Mutsva + nekuvandudza kutsva